Ngubani owasungula imoto yemoto?
Imoto njengoko siyazi namhlanje ayizange iqulunqwe ngosuku olulodwa ngumqambi omnye. Kunoko, imbali yemoto ibonisa ukuziphendukela kwemvelo okwenzeka emhlabeni wonke, ngenxa yeziphumo ezingaphezu kwe-100,000 zamalungelo abenzi abavelisi abaninzi.
Kwaye kukho ezininzi zokuqala eza kwenzeka endleleni, ngokuqala ngezicwangciso zokuqala zesithuthi esenziwe nguLeonardo da Vinci noIsake Newton.
Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba izithuthi zokuqala ezisebenzayo zixhotyiswa ngomoya.
Izithuthi zikaNicolas Joseph Cugnot
Ngomnyaka we-1769, isithuthi senqwelo sokuqala esisisigxina sasingumatshini wezempi owasungulwa ngumqhubi waseFransi kunye nomatshini, uNicolas Joseph Cugnot. Wasebenzisa injini ye-steam ukuba atshale imoto yakhe, eyakhelwe phantsi kwemiyalelo yakhe eParis Arsenal. Injini ye-steam kunye nebheyili yayihluke kwezinye iimoto kwaye yafakwa ngaphambili.
Yayisetyenziselwa i-Army yaseFrance ukukhwela iinqwelo zezixhobo kwijubane lokunyuka kwe-2 kunye ne-1/2 mph kumavili amathathu kuphela. Isithuthi saye safuneka siyeke yonke imizuzu elineshumi ukuya kwishumi elinesihlanu ukwakha amandla ombane. Ngomnyaka olandelayo, iCugnot yakha i-tricycle enamandla eneentambo ezithwele abagibeli abane.
Ngomnyaka we-1771, uCugnot wagxotha enye yeendlela zakhe zendlela eya eludongeni lwamatye, enika umqambi ilungelo lokuba ngumntu wokuqala ukuba angene engozini yemoto.
Ngelishwa, oku kwakungokuqala kwenhlanhla yakhe embi. Emva kokufa komnye wabasebenzi bakaCugnot kwaye omnye waxoshwa, ukuxhaswa kweemoto zendlela zeCugnot zome.
Ngethuba lembali yokuqala yezithuthi ezizimeleyo, zombini izithuthi kunye nezithuthi zenziwe ngeenjini zomoya.
Ngokomzekelo, i-Cugnot nayo yenzelwe ama-locomotives amabini ngamashishini awazange asebenze kakuhle. Ezi nkqubo zakuqala zanika iimoto ezivuthayo ngokutshisa amafutha aphilisayo amanzi kwibheyili, ekwakheni i-steam eyandise kwaye iqhube iipiston eziguqula i-crankshaft, eyayijika iivili.
Nangona kunjalo, ingxaki yayikuthi iinjini ze-steam zongezelela ubunzima bezithuthi ezazibonakalisa ukuba ziyilo elibi lizithuthi zendlela. Sekunjalo, iinjine zee-steam zazisetyenziswa ngempumelelo kwiivenkile . Kwaye izazi-mlando, ezamkela ukuba izithuthi zendlela zakudala zinezixhobo ezithintekayo zinobuchwephesha ngokuqhelekileyo, iimoto zihlala zicinga ukuba uNicolas Cugnot ungumqambi wezimoto zokuqala .
Isalathisi esifutshane seMoto eXhaswa ngamanzi
Emva kweCugnot, abanye abaqashi bezithuthi baye bavelisa izithuthi zendlela zomoya. Baquka omnye umfokazi ongumFrentshi u-Onesiphore Pecqueur, oye waqulunqa imoto yokuqala eyahlukileyo. Nanku umgca omfutshane wabantu abanikele ngegalelo lokuqhubeka kwemoto:
Ngomnyaka we-1789, i-patent yokuqala yase-United States isithuthi sehlabathi esinikwe amandla-moya esinikezwe u-Oliver Evans.
Ngowe-1801, uRichard Trevithick wakha inqwelo yeendlela ezinikezwa ngumoya-owokuqala eBritish Great.
EBritani, ukususela ngowe-1820 ukuya ku-1840, ama-stagecoaches ase-steam-energy ayenziwa rhoqo. Ezi zavalwa kamva kwiindlela zikawonkewonke kunye neendlela zaseburhulumenteni zaseBrithani ziphuhlisiwe ngenxa yoko.
Iitrakta zendlela eziqhutywe ngombane (ezakhiwe nguCharles Deitz) zathatha iinqwelo zokuhamba ngeParis naseBordeaux kwaze kwaba ngo-1850.
EUnited States, abaqeqeshi abaninzi bee-steam zakhiwa ukususela ngo-1860 ukuya ku-1880. Abavakalisi babandakanya uHarrison Dyer, uJoseph Dixon, uRufus Porter noWilliam T. James.
U-Amedee Bollee Sr. wakha iimoto eziphambili ze-steam kusukela ngo-1873 ukuya ku-1883. "I-La Mancelle" eyakhelwe ngo-1878, yayineenjini ezihamba phambili, i-shaft idlulela kwizahlulo, ukuqhutshwa kweevili kwivili ezisemva, sihlalo emva kwe injini. Isibilini sasiqhutyelwa emva kwegumbi lomgibeli.
Ngo-1871, uDkt. JW Carhart, uprofesa we-physics eWisconsin State University, kunye ne-JI Case Inkampani yakha imoto yemoto eyenza ukuphumelela umqhubi wee-200.
Ukufika kweeMoto zikaMbane
Iinjine ze-steam ayengezona kuphela iinjini ezisetyenziswa kwiimoto zakuqala njengoko izithuthi zineenjini zombane nazo zafumana i-traction ngexesha elifanayo.
Ngethuba elithile phakathi ko-1832 no-1839, uRobert Anderson waseSkotland wenza i-car yokuhamba. Baxhomekeke kwiibhetri ezihlaziyiweyo ezazisa amandla ombane ombane. Izithuthi zazinzima, zityhutyha, zindleko kwaye zafuneka zihlawulwe rhoqo. Umbane wawusebenza kakuhle kwaye usebenza kakuhle xa usetyenziselwa ukulawula iitrama kunye nezitalato, apho ukubonelelwa kombane kunokwenzeka.
Nangona kunjalo nge-1900, izithuthi zombane eMelika zaza zaphuma ngaphandle kwezinye iindidi zeemoto. Emva koko kwiminyaka emininzi emva kwe-1900, ukuthengiswa kweenqwelo zombane kwakuthatyathwa njengento entsha yesithuthi esinikwe yi-petroli yaza yalawula ukuthengiswa kwemarike yabathengi.
Imbali ye Yo-Yo
Imbali yokuThuthukiswa kweViyo kunye nokuSebenzisa kwabo
Imbali yegama leMoto
I-ARPAnet: I-Internet yokuqala ye-Intanethi
Imbali emfutshane yeMichiza yeMichiza
Ifowuni ye-Alexander Graham Bell yayingumngcipheko phambi kwexesha layo
Imbali ye-United States Postal Service
Ukukopela Ngexesha Lama-Olimpiki Andala
'Umdala kunye nolwandle' Imibuzo Yengxoxo
Imfazwe Yehlabathi II: UDouglas TBD Devastator
Iyintoni Ingxaki Ayingenayo Igama?
Ngaba uRafayeli washada?
Imbali yeNjini yeTeam
Biography of Venustiano Carranza
Inkcazo yeHeterogeneous (iSayensi)
Umsebenzi wokufudumala: I-Orchestra ye-Emotion
Imbali yee-Olimpiki ze-1920 e-Antwerp, eBelgium
Biography kaWilliam Nokho
Uthando oluhambelanayo phakathi kwama-Aquarians amabini
Ngaba iListerine i-Mosquito Repellent?
I-Stroke ye-NHL ende kakhulu
Imfazwe yaseMerika: uLieutenant General Ambrose Powell Hill
Imvelaphi kunye nembali yeRic e-China kunye nangaphezulu
Indlela yokudibanisa "Ihlazo" (ukuCima, ukuCima)
I-Top Backwoods I-Horror Movies
Biography kaWalt ​​Disney
Ubungqingili kwiMveliso yeSubility Example Problem
Ngaba iKrismesi iyona nto ingcono kumaSikh?
Indlela yokusebenzisa i-Dowsing Rod